Global Voices Dimy Ambinifolo Taona : Ny fiantraikan’ny olan’ny toetrandro sy ny loza mahatsiravina sasany tao Karaiba tamin’ny 2019 · Global Voices teny Malagasy
Global Voices Dimy Ambinifolo Taona : Ny fiantraikan'ny olan'ny toetrandro sy ny loza mahatsiravina sasany tao Karaiba tamin'ny 2019
Fizaràna-4: Olan'ny toetrandro, tafiotra mahery Dorian ary fitomboan'ny fahafatesana an'arabe
Voadika ny 01 Janoary 2020 9:23 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Español, русский, Italiano, English
Efa hifarana izao ny fankalazana ny tsingerintaona faha-15-n'ny Global Voice, ireto ireo tahiry telo isan'ny nahazendana indrindra avy amin'ny tarika ao Karaiba tamin'ity 2019 ity — amin'ity indray mitoraka ity, mifandraika amin'ny fitovàn'ny toetrandro.
Ny olan'ny toetrandro
Ilay mpahay maritrano nahazo ny fankatoavana LEED, Mandilee Newton sy i Tim vadiny, tao amin'ny fihetsiketsehana #ClimateStrikeTT tao amin'ny Seranan'i Espaina,, Trinidad, 25 Septambra 2019. Sary an'i Rapso Imaging, nahazoana alàlana.
Nandritra ny COP 21, ny toerana noraisin'ireo Fanjakana Nosy Madinika Andalam-pandrosoana (SIDS) toy ireo ao Karaiba, dia ny hoe tsy maintsy manohy manaiky ny faharefoana atrehan'ireny nosy ireny ilay fifanarahana navoakan'ny kaonferansa 2015 momba ny fiovaovàn'ny toetrandro. Tamin'ny 2019, notohizan'ireo olontsotra sy fikambanana mipetraka ao Karaiba ny misolo vava mandresy lahatra ho amin'ny fahatsiarovantena ara-tontolo iainana ary ireo fomba fiaina manaja kokoa ny tontolo iainana mba hisorohana ny fiakarana malakin'ny hafanana erantany sy ireo fiantraikany mandoza.
Jamaika, ohatra, nampiasa ny mozika ho toy ny fomba iray hanabeazana ny olona momba ny fiovaovàn'ny toetrandro sy hanefena ny fiovan'ny fitondrantena. Ireo hetsiky ny vehivavy ao amin'ny firenena koa dia natokana ho amin'ny fampahatsiarovantena ara-tontolo iainana. Tobago, mandritra izany fotoana izany, nampiasa ireo fitomboana tsy mitsahatra miteraka fiofoan'ny vatohara (mihasimba ny lokony) ao aminy mba ho fitaovana entina mampitandrina, satria ireo singa fototra mandray anjara amin'io zavamiseho io dia tsy inona fa ny rano miha-mafàna kokoa vokatry ny fiovaovàn'ny toetrandro.
Tamin'ny Septambra 2019, nisy tanora tonga avy amin'ny faritra manontolo nanatevina laharana ny diabe firaisankina miaraka amin'ireo diabe hafa manerantany natao momba ny fiovaovàn'ny toetrandro, nandrisika ireo mpandray anjara hamboly hazo sy handray anjara amin'ny fanatsaràna ny kalitaon'ny rano erantany, ny fahadiovana ary ny fitantànana ireo otrikarena — hetsika mahavaky fo izay manosoka ny hevitra hoe tsy vonona ny hanaiky ny olana mananontanona azy ilay faritra, izay tsy nisy nidirany velively ny nahatonga azy, nefa dia hizaka ny mafy tokoa raha avela tsy ho voafehy.
Tafiotra mahery Dorian
Pikantsary nalaina tamina lahatsary YouTube nakarin'ny NBC News mampiseho sarin'ny Honahonan'i Seranana Bahamas noravàn'ny tafiotra mahery Dorian, nalaina tamin'ny drôna.
Efa azo an-tsaina ihany fa tena hamono olona maro ny vanimpotoanan'ny rivodoza 2019 ho an'i Atlantika. Ny tsy azo novinaniana, dia hoe biby be iray, tafiotra mahery mizotra miadana, no tena hitondra izany, ny tafiotra mahery Dorian, izay nanavatsava an'i Karaiba ny làlany talohan'ny faharavàna tsy takatry ny saina naterany tao Bahamas.
Taorian'ny faharavàna, nisy avy hatrany ireo antso tao amin'ny faritra ny mba hifohazana hijery ny zavamisy momba ny olan'ny toetrandro, indrindra fa i Dorian dia nialohavan'ireo tafiotra mahery toa an'i Irma sy Maria tamin'ny 2017, izay niteraka vokadratsy nahatsiravina tany amin'ireo nosy tahàka an'i Puerto Rico sy Dominica. Na i Jamaika aza, izay tafavoaka velona tamin'ny famelezana mahafaty nataon'ilay tafiotra mahery Gilbert tamin'ny 1988, tsy afaka ny namantatra ny fomba nahafahan'ilay fanjakana nosy niatrika tafiotra iray nanana tanjaka lehibe toa an'i Dorian.
Tsy nitsitsy teny ny New Yorker ny ampitson'ny namelezan'ny tafiiotra mahery Dorian, tamin'ny filazàna hoe azo ampitahaina amina “tsy rariny ara-toetrandro” ilay fitsapàn'ny faharavàna, fitomboana tsy mitahatry ny isan'ny maty, tondradrano henjana be, fahavoazana tsy hay fantarina ary tranga henjana amin'ny rarintsaina taorian'ny zavatra nidona.
Ny 23 Septambra 2019, raha nikabary ho an'ny Vovonan'ny Firenena Mikambana ho an'ireo Tranga momba ny Toetrandro, natao tao New York, ny praiminisitr'i Barbados, Mia Mottley, no nilaza tamin'ireo mpitarika erantany hiomana amin'ny hisianà fifindràmonina faoben'ireo mpialokaloka raha toa tsy voavaha ny olan'ny toetrandro:
Amin'ny teny hafa, roa degre no ilaina esorina indray mandeha tsy miverina eo ambony latabatra. Tsy maintsy eken'ny vondrom-piarahamonina erantany fa azontsika atao tsara ny mampiato sy mamadika ny fiovaovàn'ny toetrandro. […]
Lavintsika ny ho apetraka toy ny soratra kely ery ambanin'ny pejin'ny tantara, sy ny ho fahavoazana tsy iriana ateraky ny hatendan-kanin'ny hafa , satria isika nandray anjara na dia latsaky ny iray isanjato monja aza tamin'ny fandefasana entona karbônika miteraka fihafanàn'ny tany.
Ireo mpamaky sasany tao amin'ny faritra dia nirohotra namaly ilay antso am-bovonana, ary betsaka ny fanantenana hoe hotohizan-dry zareo ny hisolo vava handresy lahatra ho an'ny tombontsoa tsara indrindran'ireo Fanjakana Nosy Andalam-pivoarana.
Ny loza an-dalambe ao Jamaika
Pikantsary nalaina tamina lahasary YouTube mampiseho lozam-pifamoivoizana iray nitranga teo amin'ny tetezana iray ao Kingston, Jamaika. Soa ihany, tsy nisy ny maty tamin'ity fifandonana hafakely ity. Lahatsary nakarin'i Best Jamaica.
Anatina karazana olana ara-tontolo iainana iray hafa, tamin'ny Novambra dia ny isa tsy mitsaha-mitombo mifandray amin'ny resaka fiara misy maotera ao Jamaika no tery alohan'ny sehatra. Tamin'ny Andro Erantany ho Fahatsiarovana Ireo Niharan-doza teny An'Arabe, 374 ireo Jamaikàna maty tanaty fifandonan'ny fiara, raha ampitahaina amin'ireo 330 tamin'ny 2018, sy 284 tamin'ny 2017.
Tamin'ny 2019, indrisy fa tsy tratran'ny ONG National Road Safety Council (NRSC), ny tanjona napetrany hoe ho “Ambanin'ny 300” ny isan'ireo maty eny an'arabe. Raha toa ka mety ho tafiditra mandray anjara amin'ny fitrangan'ny loza sasantsasany ireo singa ara-totnolo iainana, ny ankabeazan'ireo fifandonana fiara dia azo ahilika any amin'ny resaka kolontsaina, fitondrantena ary ny kolikoly.
Na tsy i Janamika irery aza ao amin'ny faritra no miatrika fitomboan'ny isan'ny fahafatesana noho ny loza an-dalambe, ny fanantenàna dia hoe miaraka aminà lalàna iray matanjaka kokoa sy fahatakarana amin'ny antsipirihany ilay olana avy amin'ireo mpandray fanapahankevitra, mba ho taona tsara kokoa anie ny 2020.